analysis Yi 1080p မူလကင်မရာ၊ သင်ရှာဖွေနေသောစောင့်ကြည့်ကင်မရာ | Gadget သတင်း
Rafa Rodríguez Ballesteros | | ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, နေအိမ်, reviews, ကင်မရာ
ရက်အနည်းငယ်ကြာ ကျွန်တော်တို့ဟာ YI မိသားစုမှနောက်ထပ်ထုတ်ကုန်တခုကိုကြိုးစားရန်လုံလောက်သည်။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာ ၀ န်ယူသည့် Xiaomi ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏ပုံစံအားလုံးတွင်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့အကြောင်းပြောကြမယ် YI 1080p မူလကင်မရာ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်သမားရိုးကျဝက်ဘ်ကင်မရာနှင့်ဝေးကွာနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ Yi Home Camera တွင်ရှိသည် wifi ဆက်သွယ်မှုနှင့် 1080p resolution။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခု ကျွန်တော်တို့ကို utilities ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကပေးထားပါတယ်။ Yi Home Camera အကြောင်းပိုမိုသိလိုလျှင်ဆက်ဖတ်ပါ။
1 ယီအိမ်ကင်မရာ၊ ကင်မရာတစ်လုံး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်
5 အချိန်နှင့်တပြေးညီဗွီဒီယို (သို့) ရုပ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
6 Yi Home Camera အတွက်ကိုယ်ပိုင်လျှောက်လွှာ
7 Yi Home Camera ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
ယီအိမ်ကင်မရာ၊ ကင်မရာတစ်လုံး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်
ကင်မရာကိုသေတ္တာထဲကနေဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကတော့၊ ၎င်း၏ပစ္စည်းများနှင့်၎င်း၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချော၏။ အရည်အသွေးနှင့်မျက်စိနှင့်ထိတွေ့မှုအရည်အသွေးကိုထုတ်ပေးသည်။ ငါတို့ဟာ Yi ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်တွေကိုစမ်းသုံးကြည့်ရတာကံကောင်းတယ်၊ ငါတို့ပြောနိုင်တာပေါ့ အပြည့်အဝအရည်အသွေးမြင့်စံတွေ့ဆုံရန်. ဤနေရာတွင် Amazon မှ Yi Home Camera ကို ၀ ယ်နိုင်သည် အခမဲ့ရေကြောင်းနှင့်အတူ။
ပိသန္ဓေအစပိုင်းမှာ စောင့်ကြည့်ကင်မရာအဖြစ် ကတပ်ဆင်ထားသည့်နှင့်အတူအင်္ဂါရပ်များပေးတော်မူ၏။ ထိုအရာများထဲမှကျနော်တို့အသေးစိတ်နိုင်ပါတယ် ညဉ့်ရူပါရုံကိုသို့မဟုတ်ဆူညံသံရှာဖွေရေး။ ဒါပေမယ့်ဘာလဲ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်အတွက်အံ့ wonder စရာကောင်းတဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ် 1080p ပုံရိပ်အရည်အသွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ် နှစ်လမ်းသွားအသံ။ ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ပြောဆိုမည့်အကြောင်းအရာများ။
Yi Home Camera ၏အသွင်အပြင်ကိုသတိမပြုမိပါ။ သူတို့ရဲ့ ကွေးလိုင်းများနှင့်အရောင်များနှင့်ပစ္စည်းများရွေးချယ်မှုကယ့်ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ထောင့်တွင်မဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ Gadget သည်သတိမပြုမိဘဲဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်အောက်ခံပြားသည်အဖြူရောင်ဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်ဘယ်မှာလဲ မြို့ပတ်ရထား module တစ်ခု တောက်ပအနက်ရောင်၌တည်၏ ဘယ်မှာမှန်ဘီလူးတည်ရှိသည်။
သေတ္တာထဲကို ၀ င်ပြီးငါတို့တွေ့သမျှအရာအားလုံးကိုပြောပြဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ပထမဥပမာမှာကင်မရာကိုယ်နှိုက်ငါတို့ပြောသည့်အတိုင်းမျက်လုံးနှင့်ထိတွေ့မှုအတွက်အလွန်သာယာသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည် USB မှ Micro USB format ကေဘယ်။ ပြီးနောက် ထရန်စဖော်မာဝန်, အားလုံးထုတ်လုပ်သူဘူး box ထဲမှာပါဝင်သည်။
ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှု၊ ၎င်း၏ကေဘယ်လ်နှင့်အားသွင်းတဲ့ connector ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Yi Home Camera ကိုမည်သည့်ကွန်ပျူတာနှင့်မှချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ Wi-Fi အချက်ပြသည့်နေရာတိုင်းတွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည်။ သင့်တည်နေရာကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေနိုင်သောကေဘယ်တစ်ခု Socket တစ်ခုနှင့်နီးစပ်သော။
ထို့အပြင် box ထဲမှာငါတို့ရှာပါ စပိန်ဘာသာနဲ့ပါ ၀ င်တဲ့လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ။ အာမခံစာရွက်စာတမ်းများ, စတစ်ကာများနှင့် လက်ဆောင်အနည်းငယ် မြှင့်တင်ရေး။ ဒီကင်မရာကို ၀ ယ်တဲ့အခါ Yi ကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတယ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃၃% လျှော့စျေးရရှိသော QR ကုဒ်ပုံစံမြှင့်တင်ရေးကုဒ်တစ်ခု မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် encryption ကိုသိုလှောင်မှုန်ဆောင်မှု၌တည်၏ ရီတိမ်တိုက်၌တည်၏.
Yi Home Camera ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုမင်းတို့ပြောခဲ့သလိုပဲငါတို့ချစ်ခဲ့ကြပြီ။ ကျန်ရှိနေသေးသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ပါ။ The ကင်မရာကိုယ်ထည်နှင့်အခြေစိုက်စခန်းကိုယ်တိုင်ကအလွန်ပါးလွှာသည်။ အသေးစိတ်လုပ် အလေးချိန်အလွန်ပေါ့ပါးပြီး ပို၍ သတိပညာရှိသည် အမြောက်အများကင်မရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းမှာရှိပါတယ် လှည့်တဲ့ပတ္တာ (နောက်ကျောနှင့်ထွက်) လွယ်ကူခြင်းနှင့် 180 ဒီဂရီကျော်လွန်။ ဒါ့အပြင်သူက၎င်းကို၎င်း၏အခြေအမြစ်မှာ (သို့) လိုအပ်ရင်နံရံတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားမမှန်မကန်သောမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၏အောက်ခြေ ၎င်း၏ခြေစွပ် non- စလစ်ရော်ဘာနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်.
ထဲမှာ နောက်ဘက် မော်ဂျူးတစ်ခုကိုလည်းအနက်ရောင်နဲ့တွေ့တယ် ပါဝါထွက်ပေါက်။ မည်သည့်ကေဘယ်အမျိုးအစားကိုမဆိုချိတ်ဆက်နိုင်သည် မိုက်ခရို USB။ Yi Home Camera သည်၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေများကိုချဲ့ထွင်စေသောအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ က Micro SD မှတ်ဉာဏ်ကဒ်အထိုင်။ ပြီးနောက် reset ခလုတ် မည်သည့် settings ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်။
ဤနေရာတွင် Amazon ရှိ Yi Home Camera ကိုဝယ်ပါ အခမဲ့ရေကြောင်းနှင့် 10% လျှော့စျေးနှင့်အတူ။
Yi Home Camera ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကပြုလုပ်သည် အိမ်တွင်းသုံးရန်ကင်မရာတစ်လုံး။ ၎င်း၏ Wi-Fi ကိုဆက်သွယ်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပေမယ့် ကျနော်တို့ကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထွက်ပေါက်ရှိသည်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကျနော်တို့ကနေရာချထားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်“ အပြင်ထွက်” အသုံးပြုမှုကိုဆီးတားရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ သို့တိုင်, ကတပ်ဆင်ထားသည် ပြင်ပစောင့်ကြည့်ကင်မရာကဲ့သို့တူညီသောအင်္ဂါရပ်များ.
အင်္ဂါရပ်တွေ ညရူပါရုံ ထိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်“ ကြည့်ရှုရန်” မည်သည့်မီးကိုမဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်မှောင်မိုက်နေသောအလင်းရောင်များသို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သောအလင်းရောင်ကြောင့်သင်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ပါ။ The အနီအောက်ရောင်ခြည်နည်းပညာ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ထားသည့်နေရာ၌ကြည်လင်သောပုံရိပ်များကိုကြည်လင်စွာရရှိစေသည်။
၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုချဲ့ထွင်သော extras နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ရွေ့လျားမှုထောက်လှမ်းခြင်း။ ကင်မရာပျင်းရိခြင်းနှင့်နိုင်ပါတယ် ယင်း၏အာရုံခံကိရိယာရွေ့လျားမှုကို detect သောအခါအလိုအလျှောက်သက်ဝင်။ သူတို့ပြုလိမ့်မည် အချို့သောအသံ / ဆူညံသံကိုတွေ့ရှိသောအခါအတူတူပင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါကိုအိမ်စောင့်ကြည့်ခြင်း (သို့) ကလေးစောင့်ကြည့်ခြင်းအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ဆော့ဝဲလ်မှပေးသောရွေးစရာများကျေးဇူးတင်ပါသည် App ၏ကိုယ်တိုင်မှတစ်ဆင့်သတိပေးချက်များမှတစ်ဆင့်အသိပေးချက်များလက်ခံခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့က configure လုပ်နိုင်တယ်၊ အကယ်လို့ကင်မရာကိုလှုပ်ရှားမှု (သို့) ဆူညံမှုကြောင့် activate လုပ်ရင်၊ သတိပေးအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိတယ်။ ပါဝါကေဘယ်လ်နှင့် wifi ဆက်သွယ်မှုဖြင့်သာ၊ ကျနော်တို့အိမ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထားနိုင်ပါတယ် Yi Home Camera မှအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီဗွီဒီယို (သို့) ရုပ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
ငါတို့မှာရှိတယ် အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုရွေးချယ်စရာ Yi Home Camera အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းရဲ့ Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပြည့်စုံသောလျှောက်လွှာတစ်ခုပြုလုပ်ပါ ကျနော်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုထံမှအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ပုံရိပ်တွေကိုရယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ကင်မရာမှတဆင့်အပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ် နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆို, က၎င်း၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အသံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ငါတို့ရှိသည် စပီကာနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းအားလုံးရှိသည်မဟုတ်တစ်ခုခု။
ငါတို့လိုအပ်သည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းYi Home Camera သည်၎င်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ငါတို့ရှာတယ် ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခု ရုပ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ဘို့။ သင်၏ slot ကိုသုံးနိုင်သည် micro SD က ပုံများသိမ်းဆည်းရန်။ ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကိုသုံးနိုင်သည် cloud သိုလှောင်မှုစနစ် ဝန်ဆောင်မှုကဘာလဲ ရီတိမ်.
Su wide angle မှန်ဘီလူး ဒါဟာစောင့်ကြည့်ဖို့နေရာကောင်းတစ်နေရာနှင့်အတူ, ငါတို့အခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်ဝုဏ်အတွင်းအပြည့်အဝဖုံးလွှမ်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံပါတယ်။ နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားသောပုံရိပ်တွေရှိသည် 1080 HD အရည်အသွေး အဲဒါကိုထူးခြားတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာတစ်ခုလုပ်ပါ။ ထို့ထက်ကား၊ အားလုံးအိတ်ကပ်၏လက်လှမ်းမမီအတွင်း။ ကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုသည်ကံကြမ္မာကိုမလိုအပ်ပါ။ ဒီမှာ Yi Home Camera ကို Amazon မှာရနိုင်တယ် ရေယာဉ်ခမပါဘဲ
Yi Home Camera အတွက်ကိုယ်ပိုင်လျှောက်လွှာ
ရေးသားသူ: Kami Vision
သူကသဟဇာတဖြစ်သောပလီကေးရှင်းပါသောကိရိယာတစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော gadget အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံပြည့်စုံပြီးအားလုံးကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစေသည် အားလုံးအကျိုးကျေးဇူးများ၏အားသာချက်ယူပါ ကဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာစမ်းသပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့တဲ့ YI ထုတ်ကုန်တွေလိုပဲ \_ t YI Home Camera တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် application လည်းရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ထုတ်လုပ်သူမှကမ်းလှမ်းသောကင်မရာအားလုံးနီးပါးအတွက်ရည်ရွယ်ထားသည့်တူညီသော application သည် ထို့အပြင်၎င်းသည်ကြွင်းသောအရာနှင့်ခွဲခြားရန်စီမံထားသောကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အရည်အသွေးအချက်ဖြစ်သည်။
Android app နှင့် iOS အတွက်သဟဇာတဖြစ်သော application ကို download လုပ်ပါကကင်မရာကိုချက်ချင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကင်မရာတွေကိုလက်ရှိနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လိုတယ်နှင့်ဤအလင်းလိမ့်မည်။ အသံချဲ့စက်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ပြောသောအသံကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားရလိမ့်မည်။
၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်ရန်၊ လျှောက်လွှာသူ့ဟာသူ QR ကုဒ် generate ပါလိမ့်မယ် ကင်မရာတွေရှေ့မှာဖတ်ရမယ်၊ တစ်ချိန်ကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည် ကုဒ် ကင်မရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်သို့အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်တွေ့တွင် application မှတဆင့်ကင်မရာများမှတ်ပုံတင်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်အလွန်လွယ်ကူသည်။
ရေးသားသူ: YI Technologies, Inc.
Yi Home Camera ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
ငါတို့သည်သင်တို့၏အမှန်တကယ်ကြိုက်တယ် ရိုးရှင်းသော၊ အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးခေတ်မီသောဒီဇိုင်း ကြောင်းအိမ်၏မည်သည့်ထောင့်တွင် fit ပါလိမ့်မယ်။
အ အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ ၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသဖြင့်ဆက်လက်အသုံးပြုရန်နှင့်ရေတံခွန်များနှင့်ရိုက်ခတ်မှုများခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
La ညရူပါရုံ အိမ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်မှုအတွက်အသုံးပြုမှုပေါင်းများစွာပေးထားသည်။
El bi-directional အသံ ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နေရာမဆိုကနေကင်မရာကတဆင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပြုသည်။
ထို ကိုယ်ပိုင်ဘက်ထရီမရှိပါ နေရာချထားသည့်နေရာသည်ကြိုးအရှည်သို့မဟုတ် Plug တစ်ခုနှင့်နီးကပ်စွာကန့်သတ်ထားသည်။
သူ့မှာ internal memory မရှိပါ၎င်းကို Micro USB ကဒ်အထိုင်နှင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
သူ့မှာ internal memory မရှိပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » reviews » Yi 1080p မူလကင်မရာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း